Kuyini, kanjani futhi nini umoya wasolwandle | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela uke waqaphela umoya wasolwandle esikhunjeni sakho futhi wazibuza ukuthi wenziwa kanjani nokuthi kungani. Kokubili uMhlaba namanzi kuyaqhubeka ukufudumala nokupholisa kunikezwe umehluko emazingeni okushisa avela phakathi kwemini nobusuku. Lapho umoya ongaphezulu ushisa ngaphezu kokujwayelekile emini, kwakheka imisinga yomoya ephezulu, yakhe umoya wasolwandle.
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngomoya wasolwandle?
1 Kwakhiwa kanjani?
2 Akhiwa nini?
3 Izici zomoya wasolwandle
4 Iziqhingi nezimvula
5 Isimo sendawo
Umoya wolwandle waziwa ngokuthi i-virazón. Ngenxa yokwehluka kwezinga lokushisa phakathi kwemini nobusuku, indawo iyashisa futhi ipholile ngokujikeleza. Lokhu kubangela ubuso bomhlaba, lapho ufudumeza ngaphezu kokujwayelekile futhi ukwenze ngaphambi kobuso bolwandle, Yenza imisinga yomoya eshisayo ekhuphukayo.
Lapho umoya oshisayo ukhuphuka, njengoba ufudumele kunendawo yasolwandle, kushiya igebe lomfutho ophansi. Umoya ukhuphukela phezulu njengoba ufudumala futhi umoya obandayo oseduze nobuso bolwandle ushiya indawo inengcindezi ephezulu, okwenza bafuna ukuthatha isikhala esishiywe umoya okhuphukile. Ngakho-ke, ubukhulu bomoya obunengcindezi ephezulu kakhulu olwandle buvame ukudlula endaweni yengcindezi ephansi eseduze nomhlaba.
Lokhu kwenza umoya osuka olwandle ungene ogwini futhi ube opholile imvamisa kuba mnandi ehlobo, kepha kubanda ebusika.
Umoya wolwandle wakha nganoma yisiphi isikhathi. Kuyadingeka kuphela ukuthi ilanga lifudumale ingcosana ibe sezingeni lokushisa eliphakeme kunomoya ozungeze ulwandle. Izinsuku ezinomoya omncane ngokujwayelekile, kungaba nomoya omningi wolwandle, njengoba umhlaba ufudumala ngokwengeziwe.
Umoya omnandi kakhulu ukuzwa wenziwa entwasahlobo nasehlobo ngenxa yokuthi ilanga lifudumeza ngaphezulu komhlaba futhi namanzi asabanda kusuka ebusika. Kuze kukhuphuke amazinga okushisa olwandle ngenxa yomphumela wokujwayela, umoya wasolwandle uzoqhubeka ngokuqhubekayo.
Amandla omoya akhiqizwa umoya wasolwandle ancike ekuqhathaneni kwezinga lokushisa. Umahluko omkhulu phakathi kwezinga lokushisa lezindawo zombili, iphakamisa isivinini somoya, ngoba kunomoya omningi ofuna ukufaka esikhundleni igebe lomfutho ophansi oshiywe ukukhuphuka komoya ofudumele.
Izici zomoya wasolwandle
Umoya wasolwandle uvame ukushaya ngokungathi ngqo ngasogwini futhi uyakwazi ukufinyelela Amamayela angama-20 olwandle. Njengoba umehluko omkhulu wokushisa uyadingeka phakathi komhlaba kanye nolwandle, amandla amakhulu omoya wasolwandle atholakala ngemuva kwemini, lapho ilanga lishisa kakhulu. Isivinini somoya sibuye sincike ekubukeni kwendawo. Yize imimoya evamile elula futhi emnandi, uma i-orography inyuka kakhulu, umoya ungafinyelela kuma-25 knot.
Kwesinye isikhathi, i-convection eyenzeka ngaphezu kwezinga lokushisa lomhlaba kanye nomswakama oqinile olethwa umoya ovela olwandle, wakha amafu asathuthuka (abizwa nge-cumulonimbus) angadala izimo zokungazinzi komkhathi kanye neziphepho ezinamandla zikagesi imvula enkulu ngesikhathi esifushane. Lokhu kungumsuka weziphepho zasehlobo ezaziwayo: lezo okuthi ngemizuzu engama-20 nje kuphela, zishiye impophoma yamanzi engadala umonakalo omkhulu.
Iziqhingi zinomphumela womoya wasolwandle ogwini lonke. Imvamisa, nazo ziphakama ngemuva kwemini. Lokhu kusho ukuthi zonke izindawo ezifaneleke kakhulu ezikebheni okusetshenzwa kulengwa kuzo ziyisivunguvungu futhi kunzima kakhulu ukusithola lapho umoya wasolwandle ungashayi noma ungenamandla.
Ngomphumela ofanayo odala umoya wasolwandle, kwakhiwa ezinye zezimvula. Lo mphumela wokungenisa umoya obandayo endaweni yengcindezi ephansi eshiywe ngumoya oshisayo okhuphukayo, ukhuphuke waya ezingeni elikhudlwana, wenza imimoya ibe namandla kakhulu futhi yakhe umfutho omkhulu futhi ibe yingozi ngokwengeziwe ngamafu asathuthuka. Lawa mafu ashiya imvula eningi njengoba enjalo imvula ezindaweni ezisezintabeni zaseHimalaya.
Ehlobo, izindimbane zomoya weNingizimu-mpumalanga ye-Asia ziyashisa futhi zikhuphuke, zishiya indawo yengcindezi ephansi ebusweni bomhlaba. Le ndawo ithathelwa indawo umoya obandayo ovela olwandle oza upholile ovela e-Indian Ocean. Lapho lo moya uhlangana nendawo efudumele, ufinyelela ezintabeni eziphakeme futhi uqale ukukhuphuka kwakhe uze ufike ezindaweni eziphakeme futhi uphole, okwenza imvula enamandla kakhulu.
I-terral sayiqamba igama ngoba ihlobene nomoya wasolwandle, yize isimo nomphumela waso uphikisana ngokuphelele. Phakathi nobusuku, ubuso bomhlaba buyaphola kwazise ilanga alikhiphi nhlobo lomphumela. Kodwa-ke, ulwandle longa kangcono ukushisa okumuncwa usuku lonke ngamahora okukhanya kwelanga. Lesi simo senza ukuthi umoya uvunguzele kolunye uhlangothi, okungukuthi, ukusuka ezweni kuye olwandle. Lokhu kwenzeka ngoba izinga lokushisa lomoya eliseduze nobuso bolwandle liphakeme kunalelo lomhlaba futhi lidala indawo enomfutho ophansi womkhathi. Ngakho-ke, umoya obanda kakhulu ebusweni bomhlaba ufuna ukumboza le ndawo yengcindezi ephansi futhi uphe umoya wasolwandle ohlangothini lwasolwandle.
Lapho umoya obanda kakhulu ovela emhlabeni uhlangana nomoya ofudumele ovela olwandle, uyakheka yini eyaziwa njenge-terral. Umoya oshisayo uvunguza ubheke olwandle.
Ngalolu lwazi, kuqinisekile ukuthi sekucacile ukuthi kungani umoya wasolwandle uvela.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Umoya wolwandle
I-Ecuador ilahlekelwe yi-54% yezinguzunga zeqhwa zayo kusukela ngo-1980